၊မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths – LXXVII | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ၊မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths – LXXVII
၊မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths – LXXVII
Posted by Kyaemon on Jun 11, 2018 in Business & Economics, Education, Think Different, Think Tank, Travel |3comments
ရန်ကုန် ၊ ဇန်နဝါရီ ၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ် နိုင်ငံ အစိုးရ က မြန်မာ နိုင်ငံ အစိုးရ ထံ သို့ အဆင့်မြင့် ရွေ့လျား နေအိမ် အလုံး (၁၀၀) လွှဲပြောင်း ပေးအပ် ခြင်း အခမ်းအနား ကို ဇန်နဝါရီ ၆ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာ စက်မှု ဆိပ်ကမ်း(MIP) တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ် ခဲ့သည်။
—-အခမ်းအနား ၌ တရုတ် နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး ဟုန်လျန် က အဖွင့် နှုတ်ခွန်းဆက် စကား ပြောကြား ရာတွင် တရုတ် နိုင်ငံ အစိုးရ အနေဖြင့် ယခု အကြိမ်တွင်လည်း မြန်မာ နိုင်ငံ အစိုးရ ထံသို့ ရခိုင်ပြည်နယ် ရှိ နေအိမ် စွန့်ခွာ ခဲ့ရသူများ အတွက် ရွေ့လျား နေအိမ် ပေါင်း (၁၀၀) ကို ထပ်မံ လွှဲပြောင်း ပေးအပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ၊ ယခင် အကြိမ် လှူဒါန်း ခဲ့သည့် ရွေ့လျား နေအိမ်များ သည် မြန်မာ နိုင်ငံ အတွင်းရှိ သဘာဝဘေး ဒုက္ခ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူများ နှင့် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှု ဒဏ်ခံခဲ့ရသူများအား ကူညီရာတွင် များစွာ အထောက်အကူ ဖြစ်စေခဲ့ကြောင်း ၊ တရုတ် နိုင်ငံ အစိုးရ အနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ရှိ နေရပ် စွန့်ခွာ ခဲ့သူများ၏ ဒုက္ခကို ဖြေရှင်းပေးရန် အတွက် မြန်မာ နိုင်ငံ အစိုးရ ၏ လိုအပ်ချက်အရ ကူညီ ထောက်ပံ့မှုများ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း
http://xinhuamyanmar.com/sino-myanmar/politics/8586-2017-01-13-11-27-37န်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အတွင်း လုံခြုံရေး ၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး နှင့် မှုခင်းကြိုတင် ကာကွယ်ရေး အတွက် မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ် နိုင်ငံ သံရုံး မှ ငွေကျပ် ၂၉၅ သိန်း တန်ဖိုးရှိ ပစ္စည်းများ လှူဒါန်း
ရန်ကုန် ၊ ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အတွင်း လုံခြုံရေး ၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး နှင့် မှုခင်းကြိုတင် ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြုရန် အတွက် မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ် နိုင်ငံ သံရုံး မှ ငွေကျပ် သိန်း ၁၆၀ တန်ဖိုးရှိ စက်ဘီး အစီး (၁၀၀) ၊ ငွေကျပ် သိန်း ၁၃၅ တန်ဖိုးရှိ HYT အထိုင်စက် (၇) လုံး နှင့် လက်ကိုင် စကားပြောစက် (၁၃) လုံး စုစုပေါင်း ငွေကျပ် တန်ဖိုး ၂၉၅ သိန်းရှိ ပစ္စည်းများ ကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ထံသို့ ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်နေ့ နေ့လည် ၃ နာရီ အချိန်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရရုံး ခန်းမ(၁) တွင် ပေးအပ် လှူဒါန်းပွဲ တစ်ရပ် ကျင်းပ ပြုလုပ် ခဲ့ပါသည်။
တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းတည်ဆောက်သည့် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့သုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး စက်ရုံ ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် စတင် လည်ပတ်မည်
XINHUA 23 JANUARY 2017 HITS: 1861
ဆရာမကြီးဒေါ်ဇင်ခိုင်ရန်ပုံငွေမှ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပညာထူးချွန်ပြီး ငွေကြေးအခက်အခဲရှိသည့် ကျောင်းသား/သူ (၁၀၀) ကျော်အား စတုတ္ထအကြိမ်​​မြောက်​ ပညာသင်ထောက်ပံ့ငွေ ပေးအပ်
Xinhua 20 January 2017 Hits: 1608
http://xinhuamyanmar.com/sino-myanmar/social/14486-2018-01-20-08-58-58ဆရာမကြီး ဒေါ်ဇင်ခိုင် ရန်ပုံငွေမှ တက္ကသိုလ်ဝင် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအား ပဉ္စမ အကြိမ်မြောက် ပညာသင် ထောက်ပံ့ကြေး ပေးအပ်
XINHUA 20 JANUARY 2018 HITS: 1863
ရန်ကုန် ၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၀ ရက်(ဆင်ဟွာ)
မြန်မာ-တရုတ် ချစ်ကြည်ရေးအား ရည်ရွယ်၍ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရှိ ပညာရည် ထူးချွန်ပြီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော တက္ကသိုလ်ဝင် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအား ဆရာမကြီး ဒေါ်ဇင်ခိုင် ရန်ပုံငွေမှ ပဉ္စမ အကြိမ်မြောက် ပညာသင် ထောက်ပံ့ကြေး ပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနားအား ယနေ့ ဇန်န၀ါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့ ရှိ Myanmar Sports Hotel ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဆရာမကြီးဒေါ်ဇင်ခိုင်သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၊ မတ်လ ၃၀ ရက်တွင် ဆရာမကြီး ဒေါ်ဇင်ခိုင် ရန်ပုံငွေကို ထူထောင်ခဲ့ပြီး တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ် အသီးသီးတို့ မှ တက္ကသိုလ်ဝင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် ထူးချွန် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ အတွက် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ပထမအကြိမ် ၃၀ ဦး ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယ အကြိမ်တွင် ၁၀၇ ဦး ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် တတိယ အကြိမ် ၁၀၇ ဦး ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် စတုတ္ထ အကြိမ် အဖြစ် ၁၀၁ ဦးအား ပညာသင် ထောက်ပံ့ကြေးများ ပေးအပ်ခဲ့သည်။
ဆရာမကြီးဒေါ်ဇင်ခိုင်အား ပညာသင်ကြားရေး၊ အများကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် တရုတ်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး စသည့်ဘက်များတွင် စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်မှုများကြောင့် “သဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇဘွဲ့” အား ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ပေးအပ် ခဲ့သည်။ ဆရာမကြီး ဒေါ်ဇင်ခိုင်သည် ပေကျင်း နိုင်ငံခြား ဘာသာ တက္ကသိုလ် အငြိမ်းစား ပါမောက္ခတစ်ဦး ဖြစ်ပြီးအသက်အားဖြင့် ၉၀ နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
တရုတ် နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့ တွင် အခမဲ့ ခွဲစိတ်ကုသမှု များဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည့် မြန်မာ နိုင်ငံ ရှိ မွေးရာပါ နှလုံးရောဂါ ဝေဒနာ ခံစားနေရသော ကလေးငယ်များ အတွင်း မှ အသက် ၁၁ နှစ် အရွယ်ရှိ ဒလ မြို့ မှ မဝတ်ရည်ထွန်း က တရုတ် နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန် ထံသို့ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း စာကို ရေးသား ပေးပို့ ခဲ့သည်။
ထို့နောက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့ နှင့် တရုတ် နိုင်ငံ NGO အဖွဲ့ဖြစ်သည့် “ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဖောင်ဒေးရှင်း” တို့မှ သဘောတူညီမှု စာချုပ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ဆေးရုံဆောက်လုပ်ရေးပိုင်း ကို အဆင်ပြေမြန်ဆန်စွာ ဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ကြောင်း ၊ ယခု ကဲ့သို့ မြန်မာ နိုင်ငံ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အခန်းကဏ္ဍ တိုးတက်မြင့်မားရန် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည့် အတွက်အထူးကျေးဇူး တင်ရှိကြောင်း ပြောကြား ခဲ့သည်။
—–ယနေ့လှူဒါန်းပေးမည့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြု ကိရိယာ နှင့် ဆေးဝါကုသမှု ဆိုင်ရာ မော်တော်ယာဉ် တို့ဖြင့် တရုတ် နိုင်ငံ မှ ချစ်ခင်မေတ္တာသံယောဇဉ် ကို ပို့ဆောင်ပေးလိုကြောင်း
—-တရုတ် နိုင်ငံ မှ ဆေးရုံ အဆင့်မြှင့်တင်ရန် အတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂ သန်း ကို ကူညီပေးခဲ့ကြောင်းင်ငံ မှ မွေးရာပါ နှလုံးရောဂါ ဝေဒနာရှင် ကလေးငယ် များကို လည်း တရုတ် နိုင်ငံ သို့ အခမဲ့ အောင်မြင်စွာ ခွဲစိတ် ကုသပေး နိုင်ခဲ့ကြောင်း ၊ ထို့ပြင် လက်ရှိချိန်တွင်—
မြန်မာ နိုင်ငံ ၌ ဖြစ်ပွား နေသည့် ရာသီ တုပ်ကွေးရောဂါ(H1N1) အတွက်လည်း လိုအပ်သည့် အကာအကွယ် ပစ္စည်းများ နှင့် ဆေးဝါး များကို ထောက်ပံ့ရန် စီစဉ် ဆောင်ရွက်နေသည့် အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း
ရန်ကုန် ၊ သြဂုတ် ၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ် နိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်း က မြန်မာ နိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်း အား ရေဘေး ဒုက္ခသည်များအတွက် ကူညီထောက်ပံ့ရန် လှူဒါန်းငွေ ပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနား ကို သြဂုတ်လ ၇ ရက်နေ့ နေ့လယ် ၂ နာရီ ခွဲ တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်းရုံးချုပ် ၌ ကျင်းပ ပြုလုပ် ခဲ့ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ တရုတ် နိုင်ငံ သံမတ်ကြီး ဟုန်လျန် က တရုတ် နိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်း ကိုယ်စား လှူဒါန်းငွေများကို ပေးအပ် ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
http://xinhuamyanmar.com/sino-myanmar/social/12097-2017-08-19-09-24-22တရုတ် နိုင်ငံ ၏ မျက်စိ အတွင်းတိမ် လူနာများအား အခမဲ့ ခွဲစိတ်ပေးသည့် “အလင်းရောင် ခရီးစဉ်” လှုပ်ရှားမှု ရန်ကုန်မြို့တွင် ထပ်မံ ကျင်းပ
ရန်ကုန် ၊ သြဂုတ် ၁၉ ရက် (ဆင်ဟွာ)
မြန်မာ နိုင်ငံ အတွင်းရှိ မျက်စိ အတွင်းတိမ် ဝေဒနာ ခံစားနေရသည့် လူနာ ၂၀၀ ဦးအား အခမဲ့ ခွဲစိတ်ကုသပေးသည့် “အလင်းရောင် ခရီးစဉ်” လှုပ်ရှားမှု ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား ကို သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းအချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ သီတဂူ ရွှေပြည်ဟိန်း စက္ခုဒါန ကုသိုလ်ဖြစ် ဆေးရုံကြီး တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
——-လတ်တလော နှစ်များတွင် တရုတ် နိုင်ငံ မှ ဆေးဝါးကုသရေး နှင့် ပရဟိတ အဖွဲ့အစည်း ပေါင်း ၁၀ ခုကျော် သည် မြန်မာ နိုင်ငံ အတွင်း “အလင်းရောင် ခရီးစဉ်” လှုပ်ရှားမှု ပေါင်း ၂၇ ကြိမ် ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီး အတွင်းတိမ် လူနာပေါင်း ၆၀၀၀ ခန့်ကို အခမဲ့ ခွဲစိတ်ကုသမှု ဆောင်ရွက်ပေး နိုင်ခဲ့ကြောင်း ၊ ထို့ပြင် လက်ရှိ အချိန်၌ မြန်မာ နိုင်ငံ တွင် H1N1 ရာသီတုပ်ကွေး ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေသောကြောင့် တရုတ် နိုင်ငံ မှ ထောက်ပံ့ကူညီမည့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများသည်လည်း မကြာမီ အချိန်တွင် အထူးလေယာဉ်ဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံ ကို ရောက်ရှိတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ၊ တရုတ် နိုင်ငံ မှ မြန်မာ နိုင်ငံအား ဆေးဝါးကုသမှု လေ့ကျင့်ရေး စင်တာ နှင့် ကူးစက်ပျံ့နှံမှု ရောဂါ ထိန်းချုပ်ရေး စင်တာ တည်ဆောက်ရေး တွင်လည်း ကူညီပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း
http://xinhuamyanmar.com/sino-myanmar/social/12187-h1n1တရုတ်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် H1N1 ကာကွယ်ဆေး နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ အရေးပေါ် ကူညီ ထောက်ပံ့
XINHUA 24 AUGUST 2017 HITS: 4564
တရုတ်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် H1N1 ကာကွယ်ဆေး နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများအား အရေးပေါ် ကူညီ ထောက်ပံ့ခြင်း အခမ်းအနားအား ယနေ့ သြဂုတ် ၂၄ ရက်တွင် ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
http://xinhuamyanmar.com/sino-myanmar/social/12600-yingos-2တရုတ် နိုင်ငံ YINGOS မှ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဘုန်းတော်ကြီးစာသင်ကျောင်း ၈၀ အား တီဗွီ နှင့် ရုပ်သံဖမ်းစက်များ ထပ်မံ လှူဒါန်း
XINHUA 18 SEPTEMBER 2017 HITS: 4220
မဲခေါင်ဒေသ အလင်းရောင် ခရီးစဉ် မျက်စိ အခမဲ့ ခွဲစိတ်ကုသခြင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်
Xinhua Social 16 November 2016 Hits: 1271
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
မဲခေါင်ဒေသ အလင်းရောင် ခရီးစဉ်၏ မျက်စိ အတွင်းတိမ် ဝေဒနာရှင်များအား အခမဲ့ ခွဲစိတ်ကုသပေးခြင်း အစီအစဉ်ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်သည့် အခမ်းအနားအား နေပြည်တော်၊ ဥတ္တရသီရိမြို့ နယ်ရှိ မျက်စိ၊ နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း ရောဂါ အထူးကု ဆေးရုံကြီးတွင် ယနေ့ နံနက် ကျင်းပခဲ့ရာ နိုင်ငံတော် သမ္မတနှင့် ဇနီးတို့ တက်ရောက်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြသည်။
—–“အခုလက်ရှိမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အတွင်းတိမ်ရောဂါ ဖြစ်နေသူ သုံးသိန်းခွဲလောက်ရှိပါတယ်၊ နှစ်စဉ် ခွဲစိတ်ပေးနိုင်တဲ့ အရေအတွက်က တစ်သိန်းကျော်သာ ဖြစ်လို့ပိုပြီး ခွဲစိတ်ကုသပေးဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်၊ မျက်စိ ဆရာဝန်ဦးရေက ၃၃၀ ဦးလောက်ပဲရှိတဲ့အတွက် လူဦးရေ တစ်သိန်းခွဲမှာ မျက်စိ ဆရာဝန် တစ်ဦးနှုန်း စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်နေပါပြီ၊ မျက်စိအတွင်းတိမ်ရောဂါကို ထိထိရောက်ရောက် ကုသပေးနိုင်မှသာ မျက်မမြင် လျော့နည်းရေးကို ဆောင်ရွက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ အထူးသဖြင့် အတွင်းတိမ် ရောဂါ ဝေဒနာရှင်များကို ကွင်းဆင်း ရှာဖွေပြီး အခမဲ့ ခွဲစိတ်ကုသပေးတာကို အင်တိုက် အားတိုက် ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟုလည်း ၎င်းက ပြောခဲ့သည်။
မြန်မာ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လူတော်လူမွန်များ ပျိုးထောင်ရန် တရုတ် နိုင်ငံ မှ ပညာသင်ဆု ငွေကျပ် သိန်း ၁၃၆၀ ထပ်မံ ပေးအပ်
06 November 2016 Hits: 1165
မျက်စိ ဝေဒနာရှင်များအား အခမဲ့ ကုသပေးမည့် ၂၀၁၇ မျက်စိ အလင်းပြ ခရီးစဉ် ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း၌ ပထမဆုံး အကြိမ် စတင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်
တရုတ် နိုင်ငံ မျက်စိ အထူးကု ဆရာဝန် အဖွဲ့ မှ မြန်မာနိုင်ငံရှိ မျက်စိ အတွင်းတိမ် လူနာများအား အခမဲ့ ကုသပေးမည့် ၂၀၁၇ မျက်စိ အလင်းပြ ခရီးစဉ်အား ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း၌ ပထမဆုံး အကြိမ် အဖြစ် ယနေ့ အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်တွင် စတင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၂၀၁၇ မျက်စိ အလင်းပြ ခရီးစဉ် ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားအား တောင်ကြီးမြို့ ရှိ စ၀်စံထွန်း ဆေးရုံကြီး၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရ အဖွဲ့ လူမှုရေး ၀န်ကြီး ဒေါက်တာ မျိုးထွန်းက အဖွင့် အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် မျက်စိ ဝေဒနာရှင် စုစုပေါင်း ၃၀၀ ဦးခန့် တို့ ကို ကုသမှု ပြုလုပ်ပေးသွားမည် ဖြစ်သည့် အတွက် ဒေသခံ ပြည်သူလူထု ကိုယ်စား ၀မ်းမြောက်မိပါကြောင်း ကျေးဇူးတင်စကား ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ် နိုင်ငံ မှ အဆင့်မြှင့်တင် ပြင်ဆင် တည်ဆောက်ပေးခဲ့သည့် ဒေါ်ခင်ကြည် အမျိုးသမီး ဆေးရုံ(တရုတ်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ဆေးရုံ) လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနား ကျင်းပ
တရုတ် နိုင်ငံ အစိုးရ က မြန်မာ နိုင်ငံ အစိုးရ ထံ အဆင့်မြင့် ရွေ့လျား နေအိမ် အလုံး (၁၀၀) ထပ်မံ လွှဲပြောင်း ပေးအပ်
—မြန်မာ နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် ဒေါ်ခင်ကြည် ဆေးရုံသည် ကျန်းမာရေး အတွက် အရေးကြီး သည့် ဆေးရုံ တစ်ခု ဖြစ်သည့် အပြင် မိမိ တို့ ပြည်ထောင်စုကြီး နှင့်သူနာပြုများအတွက် အရေးကြီး သည့် ဆေးရုံ တစ်ခု အဖြစ် မှတ်ယူ ခဲ့ကြောင်း ၊ ယခုအချိန်တွင် မိခင်နာမည်ဖြင့် ဒေါ်ခင်ကြည် ဆေးရုံ ဟူ၍ ပိုမို ဖြစ်မြောက်အောင် ၊ ထွန်းကားအောင် ၊ ပြည်သူများ၏ အကျိုး ကို ပိုမို ထမ်းဆောင် နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေး ခဲ့သူများအားလုံး ကို မိမိ အနေဖြင့် ကျေးဇူးတင်ပြီး တန်ဖိုးထားကြောင်း ၊ မြန်မာ နိုင်ငံ တွင် အခြေခံအားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် လိုအပ်သည်မှာ ကျန်းမာရေး နှင့် ပညာရေး ဖြစ်ကြောင်း ၊ မကျန်းမာသည့် နိုင်ငံသူ ၊ နိုင်ငံသား များအနေဖြင့် နိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် မဆောင်ရွက် နိုင်ကြောင်း ၊ ပညာမတတ်လျင်လည်း နိုင်ငံ ကြီးပွား တိုးတက်ရန် ဆောင်ရွက်နိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း ၊
—ယခု နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ တွင် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ အောက်တိုဘာလတွင် ပြီးစီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ၊ လက်ရှိချိန်တွင် ဒေါ်ခင်ကြည် အမျိုးသမီး ဆေးရုံသည် ခေတ်မီစက်ကိရိယာ များဖြင့် ဆေးရုံသစ် တစ်ခု ဖြစ်လာ ခဲ့ပြီး မြန်မာ နိုင်ငံရှိ မိခင် နှင့် ကလေးများ တို့မှ အကျိုးကျေးဇူး ကို ခံစားရတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ၊ စီမံကိန်း အောင်မြင်ရန် အတွက် ကူညီထောက်ခံပေး ခဲ့သည့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရ နှင့် သက်ဆိုင်ရာ အသီးသီး တို့အား ကျေးဇူး တင်ရှိကြောင်း ပြောကြား ခဲ့သည်။
—ဒေါ်ခင်ကြည် အမျိုးသမီး ဆေးရုံ(တရုတ်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ဆေးရုံ) အား မြန်မာ နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ တရုတ် နိုင်ငံ သံရုံး နှင့် တရုတ် နိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဖောင်ဒေးရှင်း တို့မှ အဓိက ကူညီလှူဒါန်း ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး Art Wave Group Co.,Ltd က တာဝန်ယူ တည်ဆောက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ စီမံကိန်း အဆင်ပြေမြန်ဆန်စွာ အကောင်အထည်ဖော် နိုင်ငံရေး အတွက် မြန်မာ-တရုတ် ပူးပေါင်းကူညီဆက်ဆံရေးအသင်း ဗဟို မှ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး China Sinopharm International Corporation မှ ဆေးရုံသုံး ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြင်း နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ သင်တန်များ ပို့ချခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။(Xinhua)
တရုတ် နိုင်ငံရှိ ခေတ်မီ အဆင့်မြင့် တက္ကသိုလ်များတွင် သွားရောက် ပညာသင်ယူ နိုင်သော အခွင့်အလမ်း ရရှိမည့် တရုတ် နိုင်ငံ အဆင့်မြင့် ပညာရေး ပြပွဲ ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျင်းပ
http://xinhuamyanmar.com/sino-myanmar/social/14651-2018-01-31-10-37-04တရုတ် နိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့က ဒေါ်ခင်ကြည် အမျိုးသမီး ဆေးရုံ ထံသို့ ဈေးကွက် ရောင်းချမှု တန်ဖိုး ကျပ် သိန်းပေါင်း ၂,၂၀၀ ကျော် ရှိ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ လှူဒါန်း
XINHUA 31 JANUARY 2018 HITS: 1725
––ယခု အကြိမ် ဒေါ်ခင်ကြည် အမျိုးသမီး ဆေးရုံ သို့လှူဒါန်း ခဲ့သည့် ဆေးဝါးများ နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ ကို Yunnan General Pharmaceutical Co., Ltd. , Yunnan Shenlong Kang Pharmaceutical Co., Ltd. , Yunnan Pangu Medical Industry Management Co., Ltd. နှင့် Sinopharm Yunnan Medical Device Co., Ltd. တို့မှ ပူးပေါင်း လှူဒါန် ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၊ ယခု လှူဒါန်း ပေးခဲ့သည့် ပစ္စည်းများ တွင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်း ကိရိယာ က အများစု ဖြစ်ခဲ့ပြီး ပစ္စည်းများ အားလုံးသည် တရုတ် နိုင်ငံ ပြည်တွင်း ၌ အဆင့်မြင့် ဆေးဝါး နှင့် စက်ပစ္စည်းများ ဖြစ်ကြောင်း ၊ လှူဒါန်း ခဲ့သည့် ဆေးဝါး နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ ၏ စက်ရုံထုတ်လုပ်မှု တန်ဖိုး မှာ ကျပ် ၇၉,၆၀၄,၇၂၀ (တရုတ် ယွမ်ငွေ ၃၈၂,၇၁၅) ဖြစ်ပြီး ဈေးကွက် ရောင်းချမှု တန်ဖိုး မှာ ကျပ် သိန်းပေါင်း ၂,၂၀၀ ကျော် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။(Xinhua)
Blue Sky ကယ်ဆယ်ရေးအသင်းမှ ဖွင့်လှစ်သော အရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေး သင်တန်းမှ ထူးချွန်ကျောင်းသား ငါးဦး တရုတ်ပြည်၌ သင်ကြားခွင့် ထပ်ရမည်
http://xinhuamyanmar.com/sino-myanmar/social/13704-blue-sky-2Blue Sky ကယ်ဆယ်ရေးအသင်းမှ ဖွင့်လှစ်သော အရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေး သင်တန်းမှ ထူးချွန်ကျောင်းသား ငါးဦး တရုတ်ပြည်၌ သင်ကြားခွင့် ထပ်ရမည်
XINHUA 25 NOVEMBER 2017 HITS: 2744
လားရှိုး မြို့နယ် နမ့်စမ် ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းအတွက် ပညာရေး ဆိုင်ရာ သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းများအား မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ တရုတ် သံရုံး နှင့် China Foundation for Poverty Alleviation တို့ ပူးပေါင်း လှူဒါန်
ရန်ကုန် ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
မြန်မာ-တရုတ် ချစ်ကြည်ရေးအသင်း(ဗဟို) နှင့် တရုတ် နိုင်ငံ Blue Sky ကယ်ဆယ်ရေး အသင်း တို့မှ ပူးပေါင်း ဖွင့်လှစ်သည့် သဘာဝဘေး အန္တရာယ် အရေးပေါ် ကူညီကယ်ဆယ်ရေး သင်တန်း ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းအချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့ ရွှေတိဂုံ ဘုရား အနောက်ဘက်မုခ် တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ရန်ကုန် ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်(ဆင်ဟွာ)
လားရှိုး မြို့နယ် နမ့်စမ် ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းအတွက် ပညာရေး ဆိုင်ရာ သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းများအား မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ တရုတ် သံရုံးက လှူဒါန်း၍ China Foundation for Poverty Alleviation Myanmar Office မှ စီစဉ် ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် လှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားအား ယနေ့ နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင် ထိုဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်း၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
—–တရုတ်သံရုံ၏ အလှူငွေဖြင့် China Foundation for Poverty Alleviation Myanmar Office မှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်သည့် သိန်း သုံးရာခန့် တန်ဖိုးရှိသော ပညာရေး ဆိုင်ရာ သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းများ ဖြစ်သည့် ကွန်ပျူတာအစုံ- ၁၀ လုံး၊ ပရိုဂျက်တာ- ၁ လုံး၊ ပရင်တာ- ၁ လုံး၊ တစ်နာရီ လီတာ- ၁၂၀၀ ကျရေသန့်စက်- ၁ လုံး၊ အပ်ချုပ်စက်- ၅ လုံး၊ စောင် အထည်- ၃၀၀ နှင့် စာသင်ခုံ အလုံး- ၂၀ စုံ တို့အား ပေးအပ် လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
http://xinhuamyanmar.com/sino-myanmar/social/12149-2017-08-22-11-57-51မျက်စိ အတွင်းတိမ် လူနာ ၂၀၀ ကို အခမဲ့ ခွဲစိတ် ပေးမည့် “မဲခေါင်ဒေသ စက္ခုအလင်းခရီးစဉ်” လှုပ်ရှားမှု အား ရွှေရတုတိပိဋက စက္ခုပါလ မျက်စိဆေးရုံ တွင် စတင်ကျင်းပ
မန္တလေး ၊ သြဂုတ် ၂၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
မြန်မာ နိုင်ငံ အတွင်းရှိ မျက်စိ အတွင်းတိမ် ရောဂါဝေဒနာ ခံစားနေရသူ ၂၀၀ ဦး ကို အခမဲ့ ခွဲစိတ်ကုသပေးမည့် “မဲခေါင်ဒေသ စက္ခုအလင်းခရီးစဉ်” လှုပ်ရှားမှု အား သြဂုတ်လ ၂၂ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီအချိန်၌ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ၊ မြင်းမူမြို့နယ် ၊ ထီးဆောင်ကျေးရွာ ရှိ ရွှေရတုတိပိဋက စက္ခုပါလ မျက်စိဆေးရုံ တွင် စတင်ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
http://xinhuamyanmar.com/sino-myanmar/social/10755-2017-06-05-11-01-26တရုတ်-မြန်မာချစ်ကြည်ရေးစာသင်ကျောင်း၏ အားကစား ကွင်းသစ် ဖွင့်ပွဲနှင့် လွှဲပြောင်း ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားကို နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပ
နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၅ ရက် (ဆင်ဟွာ)
နေပြည်တော် ဇမ္ဗူသီရိမြို့ နယ်၌ တည်ဆောက်ထားသော တရုတ် – မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး စာသင်ကျောင်း ဖြစ်သော အမှတ် (၇) အခြေခံ ပညာ အထက်တန်းကျောင်း၏ အားကစား ကွင်းသစ် ဖွင့်ပွဲနှင့် လွှဲပြောင်း ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့ ( ဇွန်လ ၅ ရက်)တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နေပြည်တော် ၊ မေ ၂၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတ နိုင်ငံ သံရုံးမှ လှူဒါန်း၍ နေပြည်တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ ထောက်ပံ့ကူညီမှုဖြင့် ပူးပေါင်း ပြုပြင် တည်ဆောက်သည့် နေပြည်တော် ဇမ္ဗူသီရိ မြို့ နယ် ၊ သပြေကုန်း(ကုန်စိမ်း ၊ ကုန်ခြောက် ၊ သားငါး)ဈေးရုံ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားအား ယနေ့ မေ ၂၇ ရက်တွင် ဈေးမျက်နှာစာ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
http://xinhuamyanmar.com/sino-myanmar/social/7673-2016-11-22-09-53-56တရုတ်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး စာသင်ကျောင်းဆောင်အား တတိယ အကြိမ်မြောက် အဖြစ် စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးမြို့နယ်၌ ဖွင့်လှစ်
XINHUA 22 NOVEMBER 2016 HITS: 1760
တရုတ် – မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ကျောင်းဆောင်သစ် ဖွင့်လှစ်ပွဲ ပွင့်ဖြူတွင် ကျင်းပ
XINHUA 04 NOVEMBER 2016 HITS: 1391
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံက ဆောက်လုပ် လှူဒါန်းသည့် တရုတ် – မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ကျောင်းဆောင် သစ်များကို မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့ အပြားရှိ ရေမြုပ် ဒေသများတွင် ဆောက်လုပ် ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိရာ ဒုတိမြောက် ကျောင်းဆောင်သစ် ဖွင့်လှစ်ပွဲကို မကွေးတိုင်း မင်းဘူး ခရိုင် ပွင့်ဖြူ မြို့ နယ် ရွာခိုင်ကျေးရွာတွင် နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက် နေ့လယ်ပိုင်း၌ ကျင်းပခဲ့သည်။
Updated: 2013-09-14 18:52
YANGON – Chinese company, CATIC Bejing Co. Ltd, on Saturday handed overatotal of 19 dredgers and supporting vessels to Myanmar at the commissioning ceremony of dredgers and supporting vessels held at Nanthida Jetty of Yangon.
U Nyan Htun Aung said “because of these new dredgers and supporting vessels from China, our dredging capacity will be increased to reduce the sedimentation problem more effectively for better navigation channels and prevention of floods”.
In line with the government’s political and economic reform strategies, the Ministry of Transport and the DWIR are also planning to reform water sector in order to effectively and efficiently manage Myanmar’s water resources, he added.
He said “I also believed that these new dredgers and supporting vessels will contribute towards our endeavors for our country’s economic development by enabling the successful realization of sustainable integrated water resources management and development. ”
….The dredgers and supporting vessels imported from China CATIC Co., Ltd with assistance ofapreferential loan provided by the China EXIM Bank have arrived in Myanmar in August.
This importation will remarkably improve the watercourse dredging ability of Myanmar.
The main rivers in Myanmar like Ayeyarwady, Chindwin, Sittaung and Thanlwin are important for transportation, agriculture, hydro-power as well as water supply for urban and rural areas of Myanmar.
ကိုယ့်​နိုင်​ငံ၁၀ရာနှုန်း​ သို့မဟုတ်​ ၁၅ရာခိုင်​နှုန်ဲးရမှာ၈၅ရာခိုင်​နှုန်းက တရုတ်​အတွက်​ ဘယ်​မှာလဲံအကြိုးအမြတ်​
တကယ့်ပြည်တွင်းသို့လျှပ်စစ်ပေးနိုင်စွမ်းက 10%။ပေါက်ဖော်တို့အတွက် ဝေစုက 90%။
NEW YORK TIMES ၊ ၊နယူးရောက်တိုင်းမ်၊သတင်းစာ
By MIKE IVESMARCH 31, 2017
….But perhaps the most incendiary objection was that under the deal struck by the ruling generals, 90 percent of the dam’s electricity could go to China.
….The government’s 15 percent stake in the dam would earn it about $18 billion overa50-year concession period, analysts and local news reports said.
The vast bulk of the electricity generated – some reports say as much as 90% – was destined for export to China.
President’s Action Is Seen as Snub to Beijing and Move to Appease Dissidents
WSJ Staff Reporters
Around 90% of the power generated by the 6,000 megawatt plant was earmarked to go to China, with state-run China Power Investment Corp. earning about 70% of its profits, according to International Rivers,aBerkeley, Calif., advocacy group.
Myanmar President Heads to Beijing Amid Reported Chinese Rethink of Myitsone Dam
In 2011, Myanmar’s military-backed transitional government yielded to public protests over environmental concerns—and anger over the fact that 90 percent of the dam’s electricity was expected to go to China—and suspended the project.
China and Burma: No Longer Birds ofaFeather?
By AUNG ZAW ၊ဆောင်းပါးရှင်အောင်ဇော်
But it is important to remember that the greedy China needs Burma as well. Beijing has heavily invested in Burma’s energy sector and will continue to do so.
David I. Steinberg:ဒေဗစ်စတိုင်ဘတ်ရေး
Myitsone dam is as much Aung San Suu Kyi’s …
Feb 18, 2016 – The first trip the newly elected Myanmar president made was to Beijing in … Although China would get some 90% of the electricity generated, the … Kachin State near the confluence of two rivers that form the Irrawaddy River, …
The Myitsone Dam: A Cause for Unity or an Uprising in the Making?
Aside from the environmental, economic and social damage the construction of the dams is causing, another thorny issue is the fact that the chief beneficiary of the project, both in terms of power consumption and profits from the sale of the generated energy, is China, which will buy up to 90 percent of the electricity and keep some 70 percent of the profits.
ဖယောင်တိုင်မီး ၁၀ ၊ချောင်း က ၁၀၀%
လက်ဆောင်ဘူးတွေက ၁၀၀ %
၊လို့ New York Timesက
most incendiary objection ၊ရေးပါတယ်
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXXVIII
၊မြန်မာအစိုးရ ၊ရလိုက်တဲ့မီးအား၁၀%က၂၀၁၁မှာတပြည်လုံးသုံးတဲ့၆၀၀ MW
1st 50 yr Total 90b $ 54b $ 36b$
2nd 50 yr 90b $ 90b $ 0b $
3rd 50 yr 90b $ 90b $ 0b $ 100% 0%
Total 150yr 270b $ Myanmar Govt 234b $ CPI 36b$
Total 100% Myanmar 90% CPI 10 %
No new railway had been built for the past hundred years until now. The new Standard Gauge Railway, upon completion, will connect Kenya, Uganda, Rwanda and South Sudan. It is Kenya’s biggest infrastructural project since independence, but even more impressive is the way it’s been done. Chinese technology is combining with Kenyan skills to create one of the best examples of technology transfer on the continent. This is an example of trans-continental support in the run-up to the 6th forum for China Africa co-operation in South Africa.
၊ရေရှားဂျိဘူးတိ Djibouti၊ကရေရဖို့ ၊Ethiopiaအီသီအိုပီယားနယ်ခြားမှတရုပ်အဖွဲ့ကသွယ်ပေးပြီးရံပုံငွေစိုက်
Many cities and towns in Ghana, one of the strongest economies in West Africa, have been suffering from water and power shortages. Click to see how Chinese investors are helping to solve these problems.
တရုပ်နိုင်ငံကHarare City ရဲ့၊ရေသွယ်ပိုက်လိုင်းစံနစ်ကိုကူညီမွမ်းမံ
၊တရုပ်အဖွဲ့တွေကMozambique ၊မြို့တော်,မပူတိုMaputo ၊ကိုပြောင်းလဲ၊ပြုပြင်
And in our Fruits of cooperation series, we look at how China has helped alleviate humanitarian crises in Africa through providing aid and capacity to the areas affected.
Scholars from around the world have scoured Africa and Chinese work sites looking for evenasliver of proof that the Chinese are importing forced labor to work in Africa. To date, no one has found any indication that this widely-believed myth is actually true.
While many people mistakenly believe that the Chinese do not hire local employees, new research confirms that the vast majority of workers on these sites, upwards of 90% in Kenya for example, are locally-hired.
Seventy percent of the world’s uncultivated arable land is in Africa. And that land is seen asapossible solution to feed the globe’s growing population. But Africa’s agriculture has been declining steadily since the 70’s, and if this continent is to become the world’s bread basket, it will need some help.
Talk Africa explores China’s role in helping equip Africa with the necessary knowledge and skills to achieve it’s full agricultural potential.
Benefits of Sino-African agricultural cooperation: A joint Sino-African agricultural firm in Zambia has created over 3,000 jobs for local residents and produced 8% of Lusaka’s annual crops.
Apr.12 — Nobel Prize winning economist Joseph Stiglitz says that China may move towards the U.S.’s position on investment because they believe opening up their financial market is in the country’s best interest. Stiglitz spoke with Bloomberg’s Scarlet Fu at the China Institute’s Executive Summit in NYC.
Former deputy director at IMF says Trump’s idea that US can win trade war ‘complete nonsense’
Jason Ross, co-author of the Schiller institute Special Report, “Extending The New Silk Road To West Africa And Asia: A Vision Of An Economic Renaissance,” delivers the second address of the April7International Schiller Institute conference. Withapopulation the size of that of India, and the youngest population of any continent in the world, Africa’s physical economic development through joint work done by the United States with China would silence the racialists of the old colonial regimes forever. The world’s two largest economies, using Sun Yat-Sen’s and Abraham Lincoln’s “Three Principles of the People,” could spearhead an anti-colonial development process, removing the poverty that triggers radicalism and war.
Get your report: http://newparadigm.schillerinstitute….
===More about the April7Conference===
American President Donald Trump, Chinese President Xi Jinping, and Russian President Vladimir Putin could together, in the next months, make the most important set of decisions to affect humanity since the Renaissance of the fifteenth century. The possible settlement of the Korea issue is only one example. The right decisions made by these three nations and their allies in the next weeks, could begin, in the near term, to eliminate poverty, colonialism and war from the planet. The solutions for eliminating this triple evil lie both in our stars, and in ourselves.
The Belt and Road initiative has progressed from theory to practice. It provides developing countries with what they need most — infrastructure: roads, railways, ports, airports, power plants, oil and gas pipelines and refineries, and Free Trade Zones, along with IT, telecom and financial services. But how do Belt and Road projects actually work? What are the processes, challenges, criticisms, and risks?
Xetif Province Algeria 3000 8000
တရုပ်နိုင်ငံကAlgeria ၊အယ်ဂျီရီးယား.Setif ၊စီတစ်ပြည်နယ်မှာကုန်တင်
I took an early morning walk down the main road from international airport of Uganda to the capital of Uganda, and was connecting and learning from the locals the way of life.
It was interesting to understand the Chinese investment banks are heavily investing in the infrastructure projects across Uganda and further reach of the country and African continent.
China, is indeed Africa’s top trading-partner. This partnership, has meant, that both parties have cultivated,afriendship, based on mutual understanding and respect. CCTV’s Guy Henderson reports
တရုပ်နိုင်ငံက ၊ အာဖရိကတိုက်ရဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲ
Egypt, Sudan and Ethiopia announced today that they have reachedaconsensus over the next steps of the establishment of Ethiopia’s controversial Renaissance Dam. This, after 11 rounds of talks between the three countries. Ethiopia’s “long-awaited national project,” which is scheduled to be completed in 2017, will be Africa’s largest hydroelectric power plant withastorage capacity of 74 billion cubic metres of water.
Tanzania will buy 400 megawatts of power from Ethiopia – nearlyathird of its current total installed capacity. The country’s President Dr John Magufuli says the amount may rise even further, because Ethiopia is supplying the electricity at such cheap rates. But as Dan Ashby reports, it may not solve all Tanzania’s energy problems.
Just because you don’t see any Chinese automakers in America doesn’t mean they aren’t here competing. In fact, they’re already here inabig way. Chinese auto expert Michael Dunne joins host John McElroy with panelists Michelle Krebs from Autotrader and Reuters’ Joe White to discuss where they are and where they aren’t…just yet.
Suwalong dam,located in Jinshajiang between Sichuan and Tibet, total capability 1.2GW,will become the largest dam in Tibet Autonomous Region,also the first hydroelectric power station in Tibet surpass 1GW. Tibet has about 200GW hydroelectric resources,central government planned tens of large power stations in Tibet’s rivers. 2020s should become golden age of Tibet hydropower development. The giant dam even larger than Three gorge dam will appear in Yarlung Zangbo river great bend.
တရုတ်မူဆလင် ကြေးမုံဂျီးကိုယရင် ဝက်တားဆားဗူး ဂတိပေးထည်
Like (လက်မ ၊ထောင်တဲ့ပုံ) Ko Ko, Maung Win, Nay La Kabar & ၅၉၆၂၄၀ others